नेप्सेको सीईओमा पाल्पाका कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त, इन्साइडर ट्रेडिङ राेक्छुः कार्की - Sero Fero News
नेप्सेको सीईओमा पाल्पाका कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त, इन्साइडर ट्रेडिङ राेक्छुः कार्की
नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पाल्पा रिब्दीकाेट गाउँपालिकाका कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् गत माघ १७ गते बसेको बैठकले कार्कीलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । नेप्सेका तत्कालिन सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पदबाट राजीनामा दिएसँगै रिक्त रहेको उक्त पदमा मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले कार्कीलाई नियुक्त गरेको हो ।
रिक्त पदका लागि माग गरिएको आवेदनमा कार्कीसहित ११ जनाले आवेदन दिएका थिए । छनोट समितिले यसअघि ११ आवेदकहरुबाट ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको थियो । छनोट समितिले पाँचमध्येबाट कार्की सहित केशवप्रसाद श्रेष्ठ र रमेशकुमार भण्डारीको नाम मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस गरेको हो । सोही मध्येबाट मन्त्रिपरिषदको बैंठकले कार्कीलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
नेप्से पछिल्लो ६ महीनादेखि नेतृत्त्वविहिन अवस्थामा थियो । नेप्सेका तत्कालीन सीईओ चन्द्रसिंह साउदले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद प्रकरणमा मुछिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । साउदले राजीनामा दिएको लामो समयसम्म सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
नवनियुक्त सीइओ कार्कीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी…
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को सीइओमा नियुक्त हुनु भयो । तपाईंका योजनाहरु के-के छन् ?
सबैभन्दा पहिले त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कैयन कामहरु गर्न बाँकी छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने ग्याप देखेको छु । मेरो पहिलो प्राथमिकता सूचना प्रविधिलाई बलियो बनाउने काममै केन्द्रित हुनेछ । त्यसका साथै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेप्सको विकासमा केन्द्रित हुनेछु । अनुगमनका नयाँ औजारहरु बनाएर काम गर्नेछु ।
सेयर बजारमा लगानीका औजारहरु कम छन्, त्यस विषयमा यहाँको योजना के छ ?
पछिल्लो समयमा सेयर लगानीकर्ताको संख्या निकै बढेको छ । खासगरी अनलाइनबाट कारोबार गर्नेहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ । साथै लगानीकर्ताहरु बढ्दो संख्यामा रहँदा लगानीका अन्य के कस्ता औजारहरु हुन सक्छन् सोही विषयमा पनि काम गर्ने मेरो योजना छ ।
तपाईंले हाल सेयर बजारमा देखेका के कस्ता समस्या छन् ?
हाल सेयर बजार सम्बन्धी कैयन नीतिगत समस्या छन् । ब्रोकर कार्यालयहरुलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेछ । त्यसलाई पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङको समस्या व्याप्त छ । यो समस्या निकै ठूलो समस्या पनि हो । मेरो कार्यकालमा विगतमा भइरहेको इन्साइडर ट्रेडिङको अभ्यास न्यूनिकरण गर्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ । नेप्से कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो । धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरी सेयर बजारको विकासमा काम गर्नु नै मेरो उद्देश्य हुनेछ ।
वित्तीय साक्षरताका विषय पनि छन्, साथै सबै प्रदेशमा ब्रोकरको कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा यहाँको के योजना छ ?
पक्कै पनि वित्तीय साक्षरताका विषयमा काम गर्ने ठाउँहरु छन् । साथै, सात वटै प्रदेशमा ब्रोकर कार्यालय स्थापना गर्नका लागि नेप्सेको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नका लागि म तयार छु ।